नेपालको नयाँ नक्सा र सिमा बिबाद कलाकार के भन्छन् – Hamro Pusta
नेपालको नयाँ नक्सा र सिमा बिबाद कलाकार के भन्छन्
हाम्रो पुस्ता ११ जेष्ठ २०७७, आईतवार १३:३८
नेपालले आफ्नो खोसिएको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि कलाकारहरूले सरकारको यो कदमलाई प्रशंसा गरेका छन् । नेपाली भूमि अनधिकृत रूपमा भारतले प्रयोग गर्दै आएपछि उक्त भूमिलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारको उक्त कदमलाई कलाकारहरूले साथ दिएका हुन् ।
जारी भएको नयाँ नक्सा संविधान संशोधन गरेर संविधानमै समेट्नुपर्ने बताएका उनीहरूको माग छ । नेपालले नक्सामा समेटेको भूमि भारतले पनि आफ्नो दाबी गर्दै उसको नक्सामा समावेश गरेका कारण थप समस्या सिर्जना हुने भन्दै बाँकी समस्याको समाधान वार्तामार्फत खोज्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल नियार्तमा रोक्न सक्ने अथवा अन्य कुनै कारण देखाउँदै दुःख दिनसक्नै आशंका गर्दै त्यसतर्फ सचेत हुन पनि आग्रह गरेका छन् । आत्मनिर्भरतातर्फ जोड दिन पनि कलाकारहरूको आग्रह छ ।
कलाकारहरू केकी अधिकारी, स्वेता खड्का, करिष्मा मानन्धर, रामकृष्ण ढकाल, दीपकराज गिरी, केदारप्रसाद घिमिरे, जितु नेपाल, रेखा थापा, राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, दयाहाङ राई, पशुपति शर्मालगायतले राष्ट्रियताका पक्षमा बोलेका छन् । अधिकांश कलाकारहरूले बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि समर्थन गर्दै ट्विट गरेपछि भारतीय मिडियाले उनको विरोध गरेपछि मनीषाको पक्षमा बोलेका छन् । मनीषाको पक्षमा बोल्दै उनीहरूले सरकारको कदमको स्वागत गर्र्दै राष्ट्रियताको सवालमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नायक राजेश हमालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको बताएका छन् । उनले तथ्य प्रमाणहरुले पनि उक्त भूमि नेपालको रहेको भन्ने प्रस्ट पार्ने आधार रहेको बताएका छन् । हमालले १५ मिनेट लामो भिडियोमार्फत केही तथ्य प्रमाणबारे चर्चासमेत गरेका छन् । बिनाप्रमाण अरुको भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्न नपाइने पनि उनको तर्क छ ।
भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले भारतसँगको हाम्रो निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ । तर जब प्रश्न राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वार्वभौमसत्ता माथि उठ्छ, हाम्रो स्वाभिमान संसारकै अग्लो सगरमाथाजति नै उच्च हुन्छ ।
सीमाको विषयमा हामी सबै नेपाली एक छौँ । कोही पक्ष अनि विपक्ष छैनौं । हामीसँग स्पष्ट प्रमाण प्रशस्त छन् । हामीले आफ्नै भूमिको विषयमा कसैसँग बहस गर्न आवश्यक त छैन । तर सम्मानस्वरूप हामी प्रमाणसहित वार्ता गर्न तयार छौँ । हामी आफ्नो चिज चाहन्छौँ । अरूकोमा र्याल काड्दैनौँ ।
हामीले आज हाम्रो भूमिकै लागि आवाज उठाइरहँदा यो नभुलौँ कि हामी नेपाली विश्वभर आफ्नो वीरता, सभ्यता र सरलताका लागि कहलिएका छौँ । कुनै पनि धारणा र विचार राख्नुअघि हामी राष्ट्रियताको नाउँमा अरू राष्ट्रको खिल्ली उडाउने, आत्म–सम्मानमा ठेस पुर्याउने व्यवहारले परिचित छैनौँ भन्ने नभुलौँ । हामी बदलामा हैन बलिदानमा विश्वास राख्छौं । हामी वैमनश्यतामा हैन विचारमा विश्वास राख्छौँ । हामी छिमेकीको जमिन हडप्नमा हैन, छिमेकीलाई हाम्रै हडप्न खोजेको जमिनमा स–सम्मान चिया नास्ता खुवाएर बिदा गर्नमा विश्वास राख्छौं । भूगोलले सानो भए पनि नेपालीको मन ठूल्ठूला देशभन्दा पनि विशाल छ । नेपाली हो नी ।
‘माछी मार्न जाउन दाजै, कालापानीमा…’
हामीले ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलसहितको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समाविष्ट राष्ट्रिय नक्सा प्राप्त गर्यौं । छिमेकीको कू–दृष्टिको सिकार भएको हाम्रो माटोलाई हाम्रो नक्साभित्र समेट्न सक्ने साहस गरेकामा म सर्वप्रथम नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सारा संसारै कोरोनाको संकटमा जुधिरहेको मौका छोपेर नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटोको उद्घाटन गरी नेपालको सर्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने छिमेकीको कुचेष्टालाई नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामार्फत एउटा नराम्रो झापड हान्न सफल भएको छ । यो झापडलाई हामी सबै नेपालीहरूले ताली बजाएर अनुमोदन गरिसक्यौं । सवा तीन करोड नेपालीले अनुमोदन गरेको यो झापडले छिमेकीको दाहिने गाला नराम्ररी चड्किसकेको छ भन्ने खबर छिमेकीकै मिडियाहरूले पोखिरहको आर्तनादबाट प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाल सरकारले निकै ठूलो आँट र साहस गरेर हाम्रा अतिक्रमित भूमिलाई नेपालको नक्सामा समाहित गर्नुलाई सफलताको एउटा कडी भनेर मान्न सकिछ । तर पूर्ण सफलता भने मान्न सकिन्न । अतिक्रमित हाम्रो भूमिलाई देशको नक्साभित्र समाहित गर्दैमा हामी खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि देख्दिनँ । किनकि, हाम्रो नक्सामा समेटिएको हाम्रो भूमिलाई निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु अबको हाम्रो अर्को चुनौती हो ।
हामीले लिम्पियाधुराको चिसो माटोमा सुन्तला फलाउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? पार्वतीकुण्डदेखि गुन्जोसम्म कालोपत्रे सडकको निर्माण गरी हाम्रै सवारीसाधन कुदाउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? कुटी, नाभी र छाङरुमा भेडाबाख्रा अनि चौंरीहरू डुलाउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? दशकौंदेखि हाम्रो भूमिमा परेड खेलिरहेका छिमेकी सुरक्षकर्मीको दस्तालाई विस्थापित गरेर आफ्नै सुरक्षाकर्मीको क्याम्प खडा गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? अनि नेपाली सान र मानको प्रतीक राष्ट्रिय झन्डालाई लिपुलेकको चुचुरोमा फरफराउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । प्रश्नको उत्तर खोज्ने मात्र होइन हामी सक्छौं भन्ने सहासिलो उत्तर दिनका लागि प्रत्येक नेपाली तयार हुनुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीले प्रस्तुत गर्ने साहस, हिम्मत र आँटले नै सरकारलाई आगामी कदम चाल्नका लागि नैतिक दबाबका साथै अझ थप बल मिल्ला ।
हामीले खपत गर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीमध्ये ७० प्रतिशत सामग्री भारतीय बजारबाटै आयात हुने भएकाले भारतले हाम्रो आँट, साहस र हिम्मतलाई टुटाउन नाकाबन्दीको घोषणा नगर्ला भन्न सकिन्न । किनकि ०७२ को भूकम्पको कष्टकर घडीमा समेत हाम्रो छिमेकीले हामीलाई अघोषित नाकाबन्दीको अनुभव दिलाइसकेको छ । भारतले हामीलाई देखाउन सक्ने डर, धाक वा धम्की भनेको एउटै हो, उपभोग्य सामग्री निर्यातमा रोक । भारतको यो धम्कीलाई लत्याउन सक्ने हाम्रो प्रमुख शस्त्रअस्त्र भनेको नै हाम्रो आत्मविश्वास हो । यदि भारतले हामीलाई नाकाबन्दीको फर्मुला प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने यसका लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली मानसिक रूपमा तयार छौं त ? भोलि ग्यास, डिजेल र पेट्रोल नपाइन सक्छ, चामलको अभाव हुन सक्छ । अदुवा, प्याज र लसुन नभित्रिन सक्छ अनि चिनी नपाइन सक्छ । यस्तो अवस्था आएको खण्डमा हामी के–के गर्न तयार छौं ? के हामी ग्यासको सट्टा गुइँठो बाल्न तयार छौं ? पेट्रोलको अभावमा गाडी चल्न सक्दैन, पैदल हिँडेर यात्रा तय गर्न तयार छौं ? चामलको अभावमा भात खान नपाइएला, भोकभोकै मर्न तयार छौं ? अदुवा, लसुन र प्याजबिनाको खल्लो खोले खान तयार छौं कि छैनौं ? मधुमेहलाई बढावा दिने चिनीयुक्त चिया छोड्न तयार छौं त ? प्रश्नहरू हाम्रा लागि हुन्, यी प्रश्नको जवाफमा म तयार छु भन्ने हिम्मतिलो जवाफ जबसम्म आउँदैन तबसम्म कलापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराले देशको नक्सा भित्रबाट हामीलाई गिज्याइरहेको हुनेछ र भनिरहेको हुनेछ धिक्कार तिमीहरूको राष्ट्रवाद !
मैले यी शब्दहरू लेखिरहँदा यतिखेर भारतीय मिडियाहरूले नेपाल र नेपालीहरूको स्वाधीनतामाथि ‘थर्ड क्लास’को टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् । यी यस्ता टिप्पणीहरूले मभित्र आक्रोशको रक्तसञ्चार भइरहेको छ । तर, भगवान् गौतम बुद्धको धर्तीमा जन्मिएकी म नेपाली चेलीले संवाद, शान्ति र सौहार्द व्यवहारमा विश्वास गर्ने गरेकी छु । मलाई थाहा छ बम र बारुदको बिस्फोटनले गरेको युद्धभन्दा मन र मस्तिष्कको सम्मिश्रणले लडेको युद्ध सफल हुन्छ । अतः हामी सबैले संयमित हुँदै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउनु छ । हामीले हाम्रो भावी पुस्तालाई च्यात्तिएको नेपाल होइन, सग्लो नेपाल दिनुछ । अधुरो, अपूरो र अधकल्चो नेपाल होइन सिंगो नेपाल दिनुछ । लोलाएको, सेलाएको र झोक्राएको नेपाल होइन कलकलाएको, फुलेको र फलेको नेपाल दिनुछ । यसर्थ, आउनुस् हामी समस्त नेपाली एकढिक्का होऔं । कांग्रेस र कम्युनिस्टको सोच त्यागौं । जातीय संकीर्णतालाई भुलौं । धार्मिक पर्खाललाई भत्काइदियौं । हाम्रो एकता नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो आणविक ‘क्षेप्यास्त्र’ हो । आउनुस्, हामी एकाकार होऔं, गोलबद्ध होऔं अनि एकै स्वर र लयमा गाऔं– माछी मार्न जाउँन दाजै कलापानीमा, छेकी बारी दुवाली महाकालीमा…।
विश्वका जतिसुकै ठूला विवाद होस् त्यसको अन्त्य अन्ततोगत्वा वार्ता नै भएको इतिहास छ । यहाँ अफ्ठ्यारो भएको छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा हुनसक्छ । अर्को कुरा नक्सा त जारी गरियो यसमा हामी सम्पूर्ण नेपाली खुसी छौं । तर यसलाई संविधान संशोधन गरी हाम्रो संविधानभित्र नक्सा पार्न ढिला गर्नु हुँदैन । संविधानमा त पुरानो नक्सा छ ।
हामी एक ढिक्का भए वार्तामा नआई दोस्रो उपाय अपनाउन उनीहरूलाई पनि गाह्रै पर्ला ।
एकातिर जमिन अतिक्रमण गरेर हाम्रो सर्वभौमिकता माथि धावा बोल्ने, भएन भनेर बलिउडका फिल्म र सिरियलमा नेपालीको मानमर्दन हुने गरेर प्रस्तुत गर्ने दादागिरीको घोर भर्त्सना गर्छु । पातललोक नामक सिरियलमा नेपाली महिलाको अस्मिता र हाम्रो सार्वभौम देशको स्वाभिमानी छोरीहरूलाई जुन नीच शब्द प्रयोग गरिएको छ । त्यो घोर आपत्तिजनक छ । त्यति मात्र होइन यस्तो भाषा र हेपाहा प्रवृत्तिले बलिउडका फिल्म, कला–साहित्यको नारीप्रतिको असहिष्णुता र सोचको स्तर पनि देखाएको छ । यसको निर्माण सम्बद्ध पक्षले तुरुन्तै माफी मागोस् र रेकर्डबाट हटाइयोस् । कुन देशका छोरी बहादुर छन् भन्ने इतिहास साक्षी छ । हामीले कुनै सिरियल वा कठपुतली बनेर फिल्म खेल्नेसँग सिक्नु छैन । यता नेपालमा भारतीय सिनेमाको दलाली गर्ने, लाइन लागेर हेर्ने र घरघरमा हिन्दी सिरियल हेर्ने भीड पनि होसमा आओस् ।
यो नक्सा कक्षा ८ को किताबको हो । २०११ सालको जनसंख्या उल्लेख भएकाले २०१३ अथवा ०१३ सालपछि छापिएको हुनुपर्छ । यो नक्सामा लिम्पियाधुरा, नेपालभित्रै पर्छ । कहिलेदेखि नक्सा भारततिर लम्पसार परेर संशोधन गरे होलान् भन्ने अनुसन्धान गरिनुपर्छ । माननीयहरूले यसतर्फ पनि विचार गर्ने कि ।
नायक निखिल उप्रेतीले खोसिएको भूमि समेटेर सरकारले निकै राम्रो काम गरेको बताएका छन् । उनले भिडियोमार्फ सरकारले गुमेको भूमि फिर्ता गरेर निकै राम्रो काम गरेको बताएका छन् । भारतले सधैं नेपाललाई हेप्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारको यो कदमलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताभन्दा प्यारो जनतालाई केही नहुने उनको भनाइ छ ।
अभिनेता दयाहाङ राईले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको कदमको स्वागत गरेका छन् । उनले नयाँ नक्सा जारी गरेको सम्बन्धी समाचारहरु निरन्तर सेयर गरिरहेका छन् ।
कलाकार दीपकराज गिरीले आफ्नो फेसबुक पेजमा नयाँ नक्सा पोस्ट गर्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेका छन् :
एकजना भाइले सोधे दाइ यो नक्सामा चुच्चो खै त ?
मैले भनें–चुच्चो त छुच्चोहरूको कब्जामा छ भाइ ।
यस्तै उनले अर्को व्यङ्ग्यात्मक स्टाटस पनि लेखेका छन् :
भृकुटी बिहे गरेर लैजाने र सीता बिहे गरेर लैजाने दुवै ज्वाइँका सन्तानहरू ससुराली मारा नै हुन् ।
यता तातो भात बाटोमा बाँडेर ठूलै समाजसेवी बन्न खोजेको उता मेरो देशको छाति चिरेर राजमार्ग बनाएछन् बैरीले ।
हास्य कलाकार जितु नेपालले पनि नयाँ नक्सा फेसबुकमा राख्दै लेखेका छन्– नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएकोमा मख्ख छ यो केटो ।
गायक पशुपति शर्माले पनि नयाँ नक्सा फेसबुकमा पोस्ट गर्दै साष्टङ्ग दण्डवत धर्ती माता, मेरो देश नेपाल लेखेका छन् ।
लकडाउनमा मापासे २१ कारबाहीमा
४ बैशाख २०७७, बिहीबार १७:३१
नेकपामा माउसुली फुत्कियो, पुच्छर हल्लिँदैछ !
२३ बैशाख २०७७, मंगलवार १३:२७
‘नेपाल फिल्म अवार्ड’ हुँदै, आयोजकको दाबी अहिलेसम्मकै भव्य बनाइने
१६ श्रावण २०७६, बिहीबार १४:३७
क्याप्टेन दिनेश स्मृति प्रतिष्ठान निर्माणको स्थानीयकोद्वारा बिरोध
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १३:५६
प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि ‘इलेक्ट्रिक ट्रन्चन’को यातना
३१ बैशाख २०७७, बुधबार १८:१५
आज नयाँ कोरोना संक्रमीत फेला परेनन्